Wasaaradda Shaqada oo u digtay shirkado dadka lacago uga qaadaya inay Sacuudiga shaqo u geynayaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 25 February 2016
Magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanaya shirkado been abuur ah dadka lacago badan uga qaadanaya in ay shaqo u geenayaan Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo Dowlada Soomaaliya kasoo dalbatay shaqaalo Soomaaliyeed.
Shirkadahan dadka lacagaha uga qaadanaya in ay geenayaan Sacuudiga ayna shaqaaleesiinayaan ayaa laga furay magaalada Muqdisho, shirkadahan ayaana qofkii ka qaadaya lacag dhan 1,000-dollar ilaa 750-Dollar.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Cusmaan Libaax Ibraahim, oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay heleen xogo ku aadan in magaalada Muqdisho laga furay shirkado been abuur ah dadka lacago uga cunaya in Sacuudiga shaqo u geenayaan.
Cusmaan Libaax, ayaa sheegay in ay been abuur yihiin shirkadaha dadka lacagaha ka qaadanaya, waxa uuna tilmaamay in aysan jirin cid shirkadahaasi usoo wakiilatay in shaqaalo Soomaaliyeed ay geeyaan Sacuudiga .
”Waxaan bulshada Soomaaliyeed uga digeyna shirkadaha burcadka ah ee Muqdisho laga furay ee dadka lacagaha uga qaadanaya in ay Sacuudiga geenayaan, waa been waxna kama jirtaan cid usoo wakiilatay shaqaalana ma jirto, cidii lacag iska bixisa iyada ay quseysaa, Wasaaradana wax shaqo ah kuma lahan arintaasi” Ayuu yiri Cusmaan Libaax.
Wasiirka ayaa sheegay in Shaqaalaha Soomaaliyeed ee soo dalbadeen Shirkadaha Sacuudiga loo marayo nidaam sharci ah oo loogu tala galay, balse aysan ku jirin sharuud ah in lacago looga qaato dadkaasi in Sacuudiga la geenayo.
Waxa uu Xusay Wasiirka in ay la xariireen Shirkadaha Shaqaalaha Soomaaliyeed soo dalbaday ayna ku wargaliyeen in aysan jirin cid kale ay usoo wakiisheen in shaqaalo usoo diraan, waxa uuna u digay shirkadaha dadka lacaga been abuurka ah uga qaadanaya in Sacuudiga Geenayaan.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa horey u shaacisay in ay Soomaaliya ka rabaan dad u badan dumar oo shaqo looga abuuro Sacuudiga, waxaana arintan horey uga heshiiyay Dowladaha Soomaaliya iyo Boqortooyada Sacuuduga.